Latex goynta joodariga Gu'ga Bixiyeyaasha | Rayson
Tiirtka Guga ee Latex
Tan iyo markii la aasaasay, soosaaraha joodariga ee Rayson guga ayaa diiradda saaray bixinta macaamiisha alaabada ugu fiican. Shaqaalahayaga xirfadda leh waxay u heellan yihiin in lagu qanco shuruudaha macaamiisha ku tiirsanaanta qalabka ugu horumarsan iyo farsamooyinka. Intaa waxaa dheer, waxaan diyaarinay waax adeeg oo inta badan mas'uul ka ah bixinta macaamiisha deg-deg ah oo hufan. Had iyo jeer waxaan halkaan u joognaa inaan fikradahaaga u leexino xaqiiqda. Marabtaa inaad wax dheeraad ah ka ogaato macluumaad dheeri ah oo ku saabsan joornaalada dhaxalka ah ee birta cusub ee latex ama shirkadeenna, soo dhawow inaan nala soo xiriirto daqiiqad kasta.
Khadadka waxsoosaarka joodariga ee Lasotx ee dhameystiran iyo shaqaale khibrad leh, Soo-saare Hanson Guga Futahadka Guryaha ayaa si madaxbanaan u naqshadeyn kara, soo saarida, soo saarida, oo tijaabin kara dhammaan alaabada si hufan. Hawsha oo dhan, xirfadlayaalkeena QC ayaa kormeeraya geedi socod kasta si loo hubiyo tayada wax soo saarka. Intaa waxaa sii dheer, gaarsiinteenna waa waqtigeedu waqtigeeda oo uu buuxin karo baahiyaha macaamiil kasta. Waxaan balan qaadayaa in badeecada loo diro macaamiisha si badbaado leh oo cod ah. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid ama aad rabto inaad waxbadan ka ogaato ee ku saabsan joodariga gugayaga latex, si toos ah nala soo wac.
Soosaaraha joodariga guga ee Rayson wuxuu hubiyaa awood soo saar adag iyo hanaan adeeg oo hufan. Intaa waxaa dheer, waxaan aasaasay xarun si fiican u qalabaysan oo aan yeelanay awood xoog leh, oo naga qaaday inaan horumarinno alaabooyin cusub sida joodariga guga iyo joodariga ee cinjirka 'cinjirka' cinjirka 'cinjirka' cinjirka ''. Macaamiisha waxay ku raaxeysan karaan qancinta adeegyada macaamiisha sida xirfadle iyo adeeg ka dib iibka ka dib. Waxaan soo dhaweyneynaa baaritaankaaga iyo booqasho booqasho.
Soo-saareyaasha Xirfadleyda Xirashada Xirfadda Xirfadlayaasha
Rayson ee Aagga Warshadaha Rayson, Wadada Huasha, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, Shiinaha. Alaabada ugu waaweyn soosaarayaasha Xaraashka Xaraashka Xirfadleyda Xirashada Xirfadlayaasha. Dharka Xilliga Xilliga Xilliga Coil Soo-saare Rayson Guri-gaduhu wuxuu ku dadaalayaa inuu sameeyo noocyo cusub oo ah. Dharka Xilliga Xilliga Xilliga Coil Xakameynta tayada ee Rayson si adag ayaa loo xakameeyaa. Waxay ka hadlaysaa sheyga aluminiumka, culeyska socodka, heerka codka celiya, heerka badbaadada dabka iyo wixii la mid ah.